यौन सम्पर्क अघि यस्तो तयारी गर्छन् महिला ! « Sajha Page
यौन सम्पर्क अघि यस्तो तयारी गर्छन् महिला !
प्रकाशित मिति: September 1, 2018
यौन चाहना प्राणी सबैमा हुन्छ । ठाउँ परिवेस र वातावरण अनुसार यौन चाहना हुने हुन्छ। सम्बन्ध स्थापना गर्नु पुर्व अनेक योजनाहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यौन जीवन सुखमय बनाउन आफ्नो पार्टनरको सामिप्य र साथको खाचो परिरहन्छ । तर त्यसको लागि तयारी जरुरि हुन्छ ।
यहाँ सेक्स पहिला महिलाहरु के तयारी गर्छन होला त ? केही महिलाहरको अनुभवका केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
भित्री वस्त्र के लगाऊँ
जब म आफ्नो केटा साथिका साथ यौंनसम्पर्कको योजना बनाउँछु तब भित्री वस्त्र कुन रङको र कस्तो प्रकारको लगाउँ भनेर म खुब विचर गर्छु । त्योबेला म सबैभन्दा सेक्सी देखिने पेन्टी तथा ब्रा लगाउने कोशिस गरिरहेकी हुन्छु ।
बाथरुमका बिताउँछु धेरै समय
सेक्स सम्बन्ध बनाउन भन्दा पहिला सेभिङ, थ्रेडिङ तथा शरीरका विभिन्न भागका अनावश्यक रौं हटाउने कोशिस गर्दछु । सरसफाइका लागि आफु मात्र नभएर केटा साथिलाई पनि गुप्ताँग सफा राख्न आग्रह गर्दछु ।
आफ्नो गन्ध चेक गर्छु
म फ्रेन्स परफ्युम लगाउँछु ता कि मेरो केटा साथिलाई मिठो सुगन्ध मात्रै आओस् ।
सुरक्षित यौनसम्पर्कका बारेमा ध्यान राख्दछु
हामी यौंनसम्पर्कका बेला कुनै सुरक्षित साधान प्रयोग गर्छौ की गर्दैनौ यस विषयमा मन मनै सोच्ने गर्दछु । केटा साथिले कण्डम लगाउने कि मैलै औषधि खाने यस विषयममा तयारी गर्ने गर्दछु । असुरिक्षत यौनसम्पर्क मेरा लागि एक खराब सपना जस्तै हो ।
पेट सानो देखाउने कोसिश
जब म पार्टनरसँग सेक्सको योजना बनाइरहेकी हुन्छु । तब म डाइटिङग शुरु गरिहाल्छु । म मेरो केटा साथाीलाई सानो, फ्ल्याट तथा टमी शरीर देखाएर आकर्षित गर्न चाहान्छु । विशेषगरी सेक्स सम्बन्ध राख्ने दिन त म पूरै डाइटिङमा रहेकी हुन्छु ।
वासरुम जान भुल्दिन
म आफ्नो केटा साथिसँग सेक्स मुडमा रहेको बेला,सेक्स क्रियाकलाप शुरु हुनु अगावै बाथरुम गएर सफासु (नवभारत टाइम्सबाट)